SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bislama Bosnian Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Mauritian Creole Maya Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mongolian Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Nhamba yeZvapupu zvaJehovha pasi rese
Zvapupu zvaJehovha zvinoparidza munyika
2020 Nhamba Dzese
2020 Mishumo Yenyika Uye Yendima Dzakasiyana-siyana
Munoverenga sei nhamba yeZvapupu zvaJehovha?
Vanhu vatinoverenga seZvapupu zvaJehovha, ndevaya chete vari kuita basa rekuparidza mashoko akanaka eUmambo hwaMwari mwedzi nemwedzi. (Mateu 24:14) Zvinosanganisira vanhu vakabhabhatidzwa seZvapupu, uyewo vaya vakakodzera kuti vaite basa rekuparidza, kunyange zvazvo vasati vabhabhatidzwa.
Munhu anofanira kubvisa mari here kuti azova mumwe weZvapupu zvaJehovha?
Aiwa. Kubvisa mari handiko kunoita kuti munhu azoverengwa seChapupu kana kuti azotanga kupiwawo mabasa ekuita musangano redu. (Mabasa 8:18-20) Chokwadi ndechekuti hapana anotomboziva kuti nhingi abvisa marii. Munhu mumwe nemumwe ari Chapupu anoshandisa nguva yake, simba rake uye zvinhu zvake zvichienderana nezvaanoda uye mamiriro ake ezvinhu, kuti atsigire basa redu rinoitwa pasi rese.—2 VaKorinde 9:7.
Munoziva sei kuti vangani vari kuita basa rekuparidza?
Mwedzi nemwedzi, mumwe nemumwe wedu anonyora pasi basa raanenge aita pakuparidza, oendesa zvaanyora zvacho kuungano yaanopinda nayo. Hapana anomanikidzwa kuita izvi.
Basa rekuparidza rinenge raitwa neungano rinorongwa zvichienderana nezvaitwa zvacho, uye nhamba dzacho dzese dzinozotumirwa kuhofisi yebazi inoona nezvebasa rekuparidza rinoitwa munyika iyoyo. Bazi racho rinozotumira kumahofisi edu makuru nhamba dzese dzezvakaitwa nenyika yaro kana kuti nharaunda yaro pabasa rekuparidza.
Panopera gore rebasa * rimwe nerimwe, ndipo panozoonekwa kuti munyika imwe neimwe maiva neZvapupu zvingani mugore iroro. Nhamba dzacho dzese dzinobva dzabatanidzwa pamwe chete kuti paonekwe kuti pasi rese pane Zvapupu zvingani. Nhamba dzinoratidza basa rakaitwa munyika imwe neimwe, kusanganisira zvakaitika mubasa racho, zvinobudiswa pachikamu chepanzvimbo yedu yepaindaneti chinenge chakanzi “Pasi Rese.” Kuziva zviri kuitika pasi rese kunotikurudzira, sezvazvaingoitawo kuvaKristu vepakutanga pavainzwa mashoko ezvinhu zvinokurudzira zvaiitika.—Mabasa 2:41; 4:4; 15:3.
Munoverengawo here vanhu vane zvavanoita zvine chekuita nesangano renyu asi vasingaparidzi?
Kunyange zvazvo tisingabatanidzi vanhu vakadaro panhamba yeZvapupu, tinovagamuchira muungano dzedu. Vakawanda vavo vanopinda Chirangaridzo cherufu rwaJesu chinoitwa gore negore, saka nhamba yevanhu vakadaro inogona kuwanikwa kana tikabvisa nhamba yeZvapupu zvese munhamba yevakapinda Chirangaridzo. Muna 2020, vakapinda Chirangaridzo vaiva 17 844 773.
Vakawanda vasingapindi misangano yedu vanobatsirwa nepurogiramu yedu yekudzidza nevanhu Bhaibheri padzimba dzavo vasingabhadhari. Mugore rebasa ra2020, takaitisa zvidzidzo zveBhaibheri zvinenge 7 705 765 mwedzi mumwe nemumwe, uye zvimwe zvacho zvaiitiswa vanhu vakawanda panguva imwe chete.
Sei nhamba yeZvapupu inobuda panoverengwa vanhu nehurumende yakakura kupfuura yamunotaura?
Mapazi ehurumende anoita zvekuverenga vanhu, anowanzowana nhamba dzawo nekungobvunza vanhu kuti vanopinda chitendero chipi. Semuenzaniso, U.S. Census Bureau yakataura kuti pavanoita ongororo dzavo, vanenge “vachida kuona kana vanhu vacho vanenge vabvunzwa vachiti vane chitendero chavanopinda,” uyewo kuti nhamba dzavanozobuda nadzo “dzinoenderana nezvinenge zvataurwa nevanhu kwete zvazviri chaizvo.” Kusiyana nemapazi iwayo, vanhu vatinoverenga seZvapupu zvaJehovha ndevaya chete vanoparidzira vamwe uye vanoshuma basa ravanenge vaita, kwete vaya vanongotaura kuti tiri Zvapupu.
^ ndima 5 Gore rebasa rinotangira pana 1 September kusvika pana 31 August wegore rinenge richitevera. Semuenzaniso, gore rebasa ra2015 rakatangira pana 1 September 2014, kusvika pana 31 August 2015.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Pasi Rese Pane Zvapupu zvaJehovha Zvingani?
ijwfq nyaya 46
Mushumo Wegore Rebasa ra2020 weZvapupu zvaJehovha Pasi Rese